Free Nay Phone Latt: February 2008
နေဘုန်းလတ် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း တစ်လပြည့် အထူးပို့စ် (၁)
ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော နေဘုန်းလတ်အတွက် ပေးပို့သော ကဗျာများကို စုပေါင်း တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
နေဘုန်းလတ်ကို တွေ့ရင် (၂)
ကျွန်တော်ရင်ကို တိုက်ခတ်သွားတဲ့နွေလေ…တစ်စ ဟာ
ဒြပ်မဲ့ကမ္ဘာ ကဗျာစုထဲ မှာ အစ်ကို့ နှလုံးသားနဲ့ထုဆစ်ခဲ့တဲ့
အမေ… ဆိုတဲ့ကဗျာလေး … အဝေးရောက်သားတွေအတွက်
မျက်ရည်စို့ခဲ့ကြတဲ့… မိခင်ကိုယ်စားပေါ့… အစ်ကို နှလုံးသားက
တပါးသူတွေအတွက် အကြိမ်ကြိမ်ငိုခဲ့ရပြီးပြီ…. အစ်ကိုက အနုပညာသမားပါ…
အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတယ် မျှတမှုတွေကိုရင်ဘတ်နဲ့ပျိုးတယ်….
၂၀၀၈ ရဲ့ ကံဆိုးတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာ အစ်ကိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့
မွေးရပ်မြေမှာ နေတွေခြစ်ခြစ်တောက်ပူတယ်အစ်ကို မိုးတွေက အချိန်အခါမဟုတ်ရွာတယ်
ဖောက်လွဲဖောက်ပြန် ရာသီတွေကြားမှာ မြေကြမ်းတဲ့ကျွန်တော်တို့မွေးရပ်မြေကို
မျော်လင့်ချက်တွေနဲ့ နေ့ရက်တွေတည်ဆောက်လို့ အစ်ကိုပြန်လာမယ့်နေ့ကို
သူငယ်ချင်း အားလုံးနဲ့ အစ်ကို မိသားစုကစောင့်နေကြတယ်…
ခွဲခွာ ခြင်း ရဲ့ သမိုင်းအစ
ဇန်န၀ါရီ ရဲ့ ရက်တရက်မှာ
လား..ပေါင်း များစွာ ရဲ့အဖြေကို
ဘယ်သူ ခွန်းတုံ့ ပြန်မှာလဲ
မေ့ သားလေးများ ဖြစ်နေမလား
မိခင်တစ်ယောက် ရဲ့ မျက်ရည်တွေ
နောက်တနေ့ ရဲ့ နံနက်ခင်းအလင်းဦးမှာ
ဒေါ်လေးသွယ်( နေဘုန်းလတ်၏အဒေါ် )
နေဘုန်းလတ် လက်ရေးဖြင့် ရေးသားထားသော ကဗျာများကို မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးမှ ပေးပို့ထားပါသဖြင့် မူရင်းအတိုင်း ဖေါ်ပြပေးသွားပါမည်။
တိတ်တိတ်ကလေးနဲ့ ကမ်းပါးကို ရိုက်လိုက်တဲ့အခါ..။
ပါးလျပြီး မြိနေတဲ့ သံမဏိ ဓါးတစ်ခုနဲ့
အမျိုးကိုချစ်ရင် ဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့ စနစ်ဆိုးက
ည. သူ့ အမြင်အာရုံဟာ မာကျောနေတဲ့
ကျောက်သားများ ထဲကနေ နက်ရှိုင်းစွာ ထိုးဖောက်နေတုန်း..
သံလွင်တလှည့်ှဧရာဝတီတလှည့် စီးနေလိမ့်မယ်..။
သူတို့ရဲ့ လက်ရိုင်းတွေကြောင့် စုတ်ပြတ်မသွားစေပဲ
ပုံပန်းတကျ ကျစ်လစ်မာကျော စေဖို့ ပြုပြင် ယူခဲ့ပါလိမ့်မယ်..
ပြီးတော့. သူ ဘယ်တော့မှ လွတ်ချမှာမဟုတ်တဲ့ မြို့တော်ကြီး
အပေါ်ကနေ ဖီးနစ်ငှက်တကောင်လို ပျံဝဲလာပါလ်ိမ့်မယ်..။
( နေဘုန်းလတ်အတွက် တက်စလာမှ ပေးပို့ပါသည် )
Gtalk ကဲ့သို့ Chat နှင့် Messenger များတွင်
Custom Image အဖြစ်အသုံးပြုပေးပါရန်
(ကဗျာကို ခွန်မြလှိုင် http://khunmyahlaing.myanmarbloggers.org/2008/02/blog-post_7513.html ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်)
Labels: ကဗျာ, ကိုယ်တိုင်ရေး, ခံစားချက်, သူ့လက်ရာ
(ကဗျာကို မိုးလှိုင်ည http://moehlaingnya.blogspot.com/2008/02/blog-post.html ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်)
ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသော ဘလော့ဂါ နေဘုန်းလတ်အကြောင်းကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ ဘလော့ဂါများကလည်း သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာများဖြင့် တင်ဆက်ရေးသားထားသည်ကို အောက်ပါလင့်ခ်များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
(ကဗျာကို ခွန်မြလှိုင် http://khunmyahlaing.myanmarbloggers.org/2008/02/blog-post_11.html မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်)
(စာကို နစ်နေမန်း http://niknayman.blogspot.com/2008/02/blog-post_07.html မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြပါသည်)
ကျနော့််ကိုယ်စား ဒီစာလေးတင်ပေးပါ.. ၊ ကျနော့် နံမယ်နဲ့သုံးပေးပါ ဆိုပြီးပေးလာခဲ့တာပါ ... ။
ရေးဖွဲ့သူ ... ဇာဂနာ
(ကဗျာကို နှင်းမိုးဝေ http://hninmoewai.blogspot.com/2008/02/blog-post_07.html ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်)
(ကဗျာကို ညီညီသံလွင် http://nyinyithanlwin.blogspot.com/2008/01/blog-post.html ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်)
မမြင်နိုင်ဘူး အပြင်ဘက် တနေရာစီကို
အားလုံး 28 ပေါက်
အလင်းကိုမတွေ့ဘူး မှောင်နေတယ် ဒီဘက် ကမ္ဘာတခြမ်းမှာ
တချိန်ချိန်မှာ အလင်းတွေ့နိုင်စေဖို့ မီးတွေ ထွန်းညှိလိုက်တယ်
မပျံသန်းနိုင်ပါဘူး တခြားလွတ်မြောက်ရာ နယ်ပယ်တစ်ခုစီကို
တချိန်ချိန်မှာ ပျံသန်းနိုင်ဖို့ ငှက်ကလေးတွေကို လှောင်ချိုင့်ထဲက လွှတ်ပေးလိုက်တယ်
နင် ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်အောင် မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ငါ့ဘ၀
အားမရပေမဲ့လဲ တတ်နိုင်တဲ့ တနေရာကပဲ
ငါ ဆုတောင်းပေးပါရစေ သူငယ်ချင်း
မင်း ဒီဘ၀က အမြန်ချက်ချင်း လွတ်ကင်းနိုင်ပါစေလေ…
(ကဗျာကို မယ်လိုဒီမောင် http://melodymaungmm.myanmarbloggers.org/2008/01/blog-post_31.html ထံမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်)
နေဘုန်းလတ် မိခင်နှင့် BBC အင်တာဗျူး နားဆင်ရန်
နေဘုန်းလတ် မိခင်နှင့် DVB အင်တာဗျူး နားဆင်ရန်
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ ဒဂုံမြို့နယ်ရဲစခန်းက ဘလောက်ဂါ နေဘုန်းလတ်အား အရေးပေါ် စီမံချက် ဥပဒေဖြင့် ပုဒ်မတပ်ကာ တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီဟု မိသားစုနှင့် နီးစပ်သည့် မိတ်ဆွေများ အပြောအရ သိရသည်။
ရဲက ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သော စာရေးဆရာလည်းဖြစ်သူ နေဘုန်းလတ် (၂၈ နှစ်) အား ပုဒ်မ ၅ (ည) ဖြင့် တရားစွဲဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများနှင့် သဘောထား ကွဲလွဲသူများကို နှိမ်နင်းရာတွင် ပုဒ်မ ၅ (ည) သည် လက်နက်တခု ဖြစ်သည်။ ထိုဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်နိုင်သည်။
“နိုင်ငံရေး မသင်္ကာမှုနဲ့ ဒဂုံမြို့ ရဲစခန်းကနေ ပုဒ်မ တပ်ထားတယ်။ တရားစွဲတာပဲ ဖြစ်သေးတယ်။ သူ့ကို ခေါ်သွားတဲ့ ရဲမှူးကြီး စိုးသိန်း (ရန်ကုန်တိုင်း အထူးရဲတပ်ဖွဲ့) ကနေတဆင့် ကျနော်တို့ သိရတာပါ။ ဟု သူက ပြောသည်။
အဖမ်းခံရစဉ်က နေဘုန်းလတ် မောင်းနှင်ခဲ့သည့် ဂျစ်ကားကိုမူ ရဲစခန်းမှ ယနေ့ ညနေ ၃ နာရီခန့်တွင် မိသားစုက ပြန်လည် ရရှိခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့ စောင့်ကြည့်နေတာပဲ ရှိသေးတယ်။ တလလောက်တော့ စောင့်ကြည့်မယ်။ လိုအပ်ရင် ကျနော်တို့ဘက်ကလည်း ရှေ့နေတွေနဲ့ ဥပဒေ လမ်းကြောင်းအတိုင်း လုပ်သွားဘို့တော့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်” ဟု အမည်မဖော်လိုသူ ကိုနေဘုန်းလတ်၏ မိတ်ဆွေတဦးက ပြောသည်။
(သတင်းကို မဇ္ဈိမသတင်းဌါန http://www.mizzimaburmese.com/content/view/559/2/ မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်)
ချင်းမိုင်။ ။ ရဲများက ဘလော့ဂ်ဂါ နေဘုန်းလတ်ကို အင်္ဂါနေ့ နံနက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ဖမ်းဆီးသွားသည်။
စာရေးဆရာ တယောက်လည်းဖြစ်သူ ကိုနေဘုန်းလတ်ကို ရဲများက အင်တာနက် ကဖီးဆိုင်တဆိုင်မှ ဖမ်းသွားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူ၏ သူငယ်ချင်းများက မဇ္ဈိမသို့ ပြောပြသည်။
မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးသည်ကို သဲသဲကွဲကွဲ မသိရသေးပေ။ ကိုနေဘုန်းလတ်မှာ ဘလော့ဂ် ရေးသားသူတဦး ဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီတခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
“ကျနော်ဟာ အနုပညာကို ခုံမင်ရူးသွပ်တဲ့ လူငယ်တယောက်ပါ” ဟု သူ၏ ဘလော့ဂ်တွင် မိတ်ဆက် ရေးသားထားသည်။
ယနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီခန့်မှစ၍ သူနေထိုင်တတ်သော သင်္ကန်းကျွန်းနှင့် သုဝဏ္ဏနေအိမ်များကို ရဲများက လိုက်လံ ရှာဖွေခဲ့ကြကြောင်း နီးစပ်သူများက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ အင်တာနက် အသုံးပြုသူများက မဇ္ဈိမသို့ ပြောကြားရာတွင် လွန်ခဲ့သည့် သီတင်းပတ် အနည်းငယ်မှစ၍ စစ်အာဏာပိုင်များသည် အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို စောင့်ကြည့်မှု ပိုမိုတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
(သတင်းကို မဇ္ဈိမသတင်းဌါန http://www.mizzimaburmese.com/content/view/517/2/ မှ ကူးယူဖေါ်ပြသည်)